Linux Mint 18.1 Serena Xfce Edition Beta Inowanikwa | Kubva kuLinux
Linux Mint 18.1 Serena Xfce Edition Beta Inowanikwa
Kutenda kuna Linux Mint blog, Ini ndadzidza kuti ikozvino yave kuwanikwa kurodha pasi, iyo Linux Mint 18.1 Serena Xfce Shanduro Beta, maererano ne Ubuntu 16.04 LTS nenzvimbo yedesktop Xfce 4.12. Iyo ine rutsigiro kusvika gore ra2021, zvakare inouya yakatakurwa neyakagadziridzwa software, huwandu hukuru hwekuvandudza uye zvitsva maficha.
1 Linux Mint 18.1 Serena Xfce Edition Zvimiro
2 Dhawunirodha Linux Mint 18.1 Serena Xfce Edition Beta
2.1 System zvinoda
2.2 Ndiwedzere mirayiridzo
Linux Mint 18.1 Serena Xfce Edition Zvimiro
Iyi shanduro yakaumbwa neLinux kernel 4.4 kernel ine linux-firmware 1.157.5, inosanganisira MDM (Mint Display Manager) 2.0 login manager, pamwe neiyo X-Apps suite (Xviewer, Xreader, Xplayer, uye Xed).
Izvo zvakakosha kuti uzive iyo yekuvandudza yeiyo Whisker application menyu kune vhezheni 1.6.2, iyo ichizokutendera iwe kuti unakidzwe nechikwata keyboard kubhuroka, kutsvaga kwewebhu, shanduro dzakagadziridzwa uye akasiyana mabug fixes.
Iyo yekudzorera maneja yakave yakakwenenzverwa, ichiwedzera nyowani nyowani kuratidza mavambo emapakeji, nenzira imwecheteyo, izvozvi kernel inogadziridzwa inosimbiswa.
Nenzira imwecheteyo, yakatsiviwa Banshee neRhythmbox, uyezve maficha akaiswa pamusoro wenyaya uye dura refaira.
Unogona kutarisa zvakadzama maficha eiyi vhezheni kubva pano
Dhawunirodha Linux Mint 18.1 Serena Xfce Edition Beta
Kuti utore Beta unofanirwa kuzadzisa zvinotevera zvinodiwa, zvakare hazvikurudzirwi kwenzvimbo dzekugadzira kudzamara yave vhezheni yakagadzikana.
512MB RAM (1GB yakakurudzirwa kuti ushandise zvakanaka).
9 GB yediski nzvimbo (20 GB yakakurudzirwa).
Graphics kadhi rinokwanisa kugadzirisa rakakura kupfuura 800 × 600 (1024 x 768 yakakurudzirwa).
DVD drive kana USB port.
Iyo 64-bit ISO inogona kubhodhi neBIOS kana UEFI.
Iyo 32-bit ISO inongogona bhuti neBIOS chete.
Iyo 64-bit ISO inokurudzirwa kumakomputa ese emazuva ano (Anenge ese makomputa akatengeswa mumakore gumi apfuura ane 10-bit processor).
Iyi BETA vhezheni inogona kunge iine yakakosha bugs, zvinokurudzirwa kuiisa iyo yekuyedza zvinangwa chete uye kubatsira kuburitsa bug kune iyo Linux Mint timu pamberi peyakagadzikana kuburitswa.
Zvichakwanisika kukwidziridza kubva kune ino beta vhezheni kuenda kune yakagadzika vhezheni.
Izvo zvakare zvichave zvinogoneka kugadzirisa kubva kuLinux Mint 18. Dzokorora mirairo ichaburitswa mwedzi unouya mushure meyakagadzikana vhezheni yeLinux Mint 18.1.
Unogona kudhawunirodha iyo ISOs kubva Xfce BETA (32-chidimbu) y Xfce BETA (64-chidimbu).
Pasina kupokana, vanoda mwenje matafura uye Linux Mint kugadzikana vanofanirwa kupemberera nhasi, kuwanikwa kweiyi Beta augurs kuti munguva pfupi iri kutevera tichava neyakagadzikana vhezheni yatinogona kushandisa mazuva ese. Rangarira kuti kana iyo ISO yaiswa munzvimbo inodzorwa, gwara re Zvaunofanira kuita mushure mekuisa Linux Mint 18.1 "Serena".
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Noticias » Linux Mint 18.1 Serena Xfce Edition Beta Inowanikwa
Maitiro ekuisa KDE Plasma 5.8.5 LTS paUbuntu neDerivatives
SME network: yekutanga yakatemwa